သက်ဝေ: သီရိလင်္ကာခရီးစဉ် နောက်ဆက်တွဲ
Posted by သက်ဝေ at 11:06 PM
Anonymous August 4, 2014 at 11:30 PM
သက်ဝေ August 5, 2014 at 12:03 AM
ကျေးဇူး ကိုသက်...း)
Anonymous August 4, 2014 at 11:31 PM
လင်္ကာဝါးတီး​နောက်​ဆက်​တွဲများကို ​မျှော်​လင့်​​စောင့်​စားငတ်​မွတ်​လျက်​... :)
သက်ဝေ August 5, 2014 at 12:04 AM
ဝါးတီး မရှိတော့ဘူးလေ... ဒါအကုန်ပဲ... :D
မေမေရေးတဲ့ စာလည်း ဖတ်ချင်တယ်
ဟုတ်... စာအုပ်ထွက်ပြီးရင် တင်ပေးပါ့မယ်...း)
mabaydar August 4, 2014 at 11:51 PM
စောစောက ကွန်မန့် ရမရ မသေချာလို့ ပြန်မန့်သည်.... အစားအသောက်တွေ ကြည်ရတာတော့ မဗေဒါအတွက် အိုကေလောက်တယ်... ဗီဇာခက်လားမသိဘူး... အစ်မတို့ တိုးနဲ့သွားတာလား... တိုးက မသွားခင်ကတည်းက ၀ယ်တာလား? Singapore မှာ သီရိလကာင်္တိုးတွေ ဘယ်မှာဝယ်ရမှန်းမသိဘူး... တိုးဆိုပေမဲ့ သူက အစ်မတို့ သီးသန့်လား... တခြားလူတွေပါသေးလား... ဟီး... မေးတာတွေ အရမ်းများသွားပြီ... ပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူးပါ...
သက်ဝေ August 4, 2014 at 11:58 PM
Visa မခက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ မေမေတို့က ရန်ကုန်က လုပ်လာကြတာပါ။ Tour နဲ့ ဆိုပေမဲ့ ဟိုမှာရှိတဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်ကို လှမ်းဆက်သွယ်ရတာပါ။ သူက အကုန်စီစဉ်ပေးတာပါ။ အမတို့ သားအမိ သုံးယောက်နဲ့ အန်ကယ် အန်တီ နှစ်ယောက် စုစုပေါင်း ငါးယောက် ကားတစ်စီးနဲ့ Tour Guide နဲ့ Driver နဲ့ပါ။ အမက ဘာမှ မလုပ်ရပဲ လူကြီးတွေ စီစဉ်တဲ့နောက် အချောင်ခိုပြီး ပါသွားရတာပါ။ ဒီမှာ သီရိလင်္ကာ Tour ရယ်လို့တော့ မတွေ့ဖူးဘူး လေယာဉ်လက်မှတ်ကတော့ Mustafa က လှမ်းဝယ်တာပါ။ ဈေးမှန်ပါတယ်။း)
blackroze August 5, 2014 at 1:51 AM
စားစရာတွေက ကြည့်ရတာပစ်တို့ မြန်မာ ပုံစံနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ဘဲနော်..
ကြည့်ရတာ အိန္ဒိယလောက်တော့ လူတွေသိပ်ရှုပ် ပုံမရဘူးနော်..
စာဖတ်သူကိုဘယ်ပို့စ်မျိုးမဆိုမငြီးငွေ့ရအောင်ရေးနိုင်စွမ်းရှိသူမမသက်ဝေ.. အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်.. ရိုးရှင်းစွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောခရီးသွားမှတ်တမ်းများပါပဲ.. (Y) (y)
Adora etc. August 5, 2014 at 9:45 AM
အမသက်ရေ အမနဲ့အတူခရီးတခုလုံးလိုက်လည်နေတာ။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရေးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗီစာလဲမခက်ဘူးဆိုတော့ အမေနဲ့အဖေကို ခေါ်ပြီး ဘုရားဖူးသွားချင်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီ။
Sonata Cantata August 5, 2014 at 11:59 AM
ချမ်းသာရတဲ့ စိတ်အစဉ်လေးကို ဘေးကနေ တိုးတိုးရို့ရို့ ခိုစီးသွား...
ချစ်‌စရာ့ ကြာဇံ‌ကြော်‌ ‌လေး ヅ
Aunty Tint August 5, 2014 at 5:46 PM
i can't write myanmar font in here , i don't know why .
any way thanksalot for ur post , gotalot of general knowledge.
ဇွန်မိုးစက် August 6, 2014 at 1:35 AM
ပို့စ်စတင်ကတည်းက အရမ်းဖတ်ချင်နေခဲ့ပြီး ဖတ်ဖို့လည်း ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နက်သိပ်မကောင်းလို့ အားလုံးကို တစုတစည်းထဲ ဖတ်ဖို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ လက်လျှော့ပြီး လှည့်ပြန်သွားရတာ။ နောက်ဆက်တွဲပို့စ်လေးကိုတော့ စာရောပုံပါ သေသေချာချာဖတ်လို့ရသွားတယ်။ အင်းလေ... ဒီမှာ ည၁၂နာရီတောင် ကျော်မှကိုး။ :D
Many thanks for sharing, sis! You know I always love to read travelogue. :)
ဆွေလေးမွန် August 8, 2014 at 10:28 AM
ကော်ဖီကြိုက်တာချင်း တူတယ် အစ်မသက်ဝေ ... သိရိလင်္ကာခရီးသွားပို့(စ်) တွေ အားလုံး နှစ်သက်တယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ..